Miyaad durba dooratay dharka dhamaadka sanadka? | Ragga Stylish
Waa muhiim in la tixgeliyo waa inaan dareemno raaxo markay tahay labistaan ​​dhamaadka sanadka. Raadinta dhar naga dhigaya inaan la soo baxno fudeyd iyo qaab shaqsiyadeed oo lagu yaqaan.
Waxay kuxirantahay nooca xaflada, waxaad kaheli kartaa fikrad fiican nooca dharka loo isticmaali karo. Waa inaad hubisaa cimilada ay xafladu ka dhaceyso iyo nooca dharka ay codsadeen qabanqaabiyaasha xaflada.
1 Dharka u dhig sida midabka shaatiga
2 Isticmaalka tuxedo dhamaadka sanadka xaflada
3 Haysashada qaabka
Dharka iyadoo loo eegayo midabka shaatiga
Waxaa lawada ogyahay in midabka shaatiga aan adeegsan doono uu yahay mid muhiimad weyn leh xili walbo. Markaan ka hadlayno Maalinta Sanadka Cusub, Waxaan dooneynaa in dharka uu noqdo mid qurux badan. Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa in shaadhku noqdo madow ama caddaan.
Sidoo kale funaanadaha buluugga ah ee buluugga ah ayaa la gashan karaa ama waxay kuxirantahay qaabka, casaan ayey noqon karaan si ay ula jaan qaadaan ciida masiixiga. Dad badan, ku darida midabada dhalaalaya dharka waa sax, wax walba waxay ku saleysan yihiin isku darka la isticmaalay.
Isticmaalka tuxedo dhamaadka sanadka xaflada
Suudka noocan ah had iyo jeer wuxuu la mid yahay xarrago, waxaan ku labisan karnaa mid aan ku leenahay qolka hurdada oo ku darsamaya dharka intiisa kale. Tuxedos aad ayey ugu raaxeysan karaan noocan dabaaldegga ah sidoo kale waxay naga ilaaliyaan qabowga.
Waxaad isku dari kartaa tuxedo xirmo fiican oo aad dhadhamiso, taas oo keeneysa xarrago iyo qaab badan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad bedesho qaabkaaga, xirashada xarig qaanso ayaa kaa dhigeysa mid qurux badan oo ku habboon habeenkaas.
Waxaas oo dhan waxaa loo isticmaali karaa dhib la'aan qaab shaqsiyeed iyo nuxurka aad leedahay. Maxaa intaa ka badan, xarrago waligeed kama baxdo qaabka. Timo-jaraha wuxuu la mid noqon karaa sidii caadiga ahayd, illaa aad rabto inaad u beddesho dhacdada maalintaas.
Kabaha waa inay ahaadaan kuwo qurux badan oo lebbisan si loo ilaaliyo taabashada caadiga ah ee casriga ah. Midabka madow waa mid ku habboon in loogu isticmaalo dabaaldega dhamaadka sanadka. Waxaa macquul ah inaad ku dari karto labo kabood oo bunni ah, laakiin waxay kuxirantahay waxa aan soo sheegnay iyo aragtida aad rabto inaad bixiso.
Ilaha sawirka: Saraiva
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Sidee loo labistaa dhammaadka sanadka sanadka?
Talooyin ku saabsan sida loo siiyo cologne dheddig